Burma Partnership » AAPP’s Statement Regarding the Death of Freelance Journalist Aung Kyaw Naing, aka Par Gyi
By Assistance Association for Political Prisoners - Burma • October 27, 2014
The death of well known freelance journalist Aung Kyaw Naing, aka Par Gyi, while in military custody in Kyaikmayaw Township, Mon State, comes asashocking reminder of how extrajudicial killings, arbitrary detention and torture are still being used against citizens in Burma.
Par Gyi worked asasecurity guard for Aung San Suu Kyi during the 1988 Democratic Movement and wasamember of the Tri Color Students Group. He has since been working asafreelance journalist in and around the Thai-Burma border. Par Gyi disappeared after he completed photo documentation work in Kyaikmayaw Township, reporting on the ongoing violent clashes between the government forces and the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA).
It has since been reported he was arrested on September 30th by Light Infantry Battalion No-204 and died in custody on October 4th. The government position on the death of Par Gyi is that his alleged actions in trying to stealagun during his detention caused his own death. So far we have seen no basis for this allegation, with his body not even being returned to his family. The fact is he was killed whilst in custody, an unacceptable violation of basic civil rights.
Par Gyi’s death isareprehensible demonstration of how the rights of the citizen in Burma are not respected and how intimidation and violence are used against them. Extrajudicial killings, arbitrary detention and torture are abhorrent violations of basic human rights and the death of Par Gyi serves to highlight how these practices are systematically being used to oppress people and deny basic civil liberties. The government must be open about what really happened to Par Gyi and we demand an investigation into not only his death but into all accounts of extrajudicial killings.
We strongly decry the actions of the government in this case and in all cases of extrajudicial killing, arbitrary detention and of torture. We are calling for an investigation into both Par Gyi’s case and all other cases that violate basic human rights and ignore the rule of law. If this government wishes to seeafree democratic Burma then they must be strong in this issue and end these systematic and inhumane practices.
Secretary Tate Naing – 66 (0)812878751
Joint Secretary Bo Kyi – 95 (0)9425308840
အလွတ်သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အေအေပီပီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်တပ်၏ အကျဉ်းစခန်းအတွင်း အလွတ် သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး သေဆုံးသွားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နိုင်ငံသားများအပေါ် မတရား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်း မှုအား ဆက်လက်အသုံးပြုကာ တရားမဲ့ သက်ဖြတ်ခြင်းများကို အမှတ်ရစေသည့် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကိုပါကြီးသည် ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကာလကြီးအတွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် သုံးရောင်ခြယ် ကျောင်းသားများအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီး ထိုကာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း၏ လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကိုပါကြီးသည် အလွတ်သတင်းထောက် တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လတ်တစ်လော ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော် (DKBA) တို့၏ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများအကြောင်း သတင်းယူခဲ့ကာ၊ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရေး ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သတင်းယူခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ် လက်အောက်ခံ အမှတ် (၂၀၄) ခြေမြန်တပ်ရင်း၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရကာ အမှတ် (၂၀၈) ခြေမြန်တပ်ရင်းသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့ တွင် သေဆုံး သွားကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရအာဏာပိုင်တို့မှ ကိုပါကြီးသည် ဖမ်းဆီးထားစဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးယူနေသော စစ်သားတစ်ဦး၏ လက်နက်ကို လုယူကာ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားခဲ့သည့်အတွက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ရသောကြောင့် သေ ဆုံးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ မိမိတို့အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ စွပ်စွဲ မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် သက်သေမှ မတွေ့ရှိရပဲ အာဏာပိုင်တို့မှ သေဆုံးသည့် အလောင်းအား မိသားစုဝင်များသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်လည်း ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုပါကြီးအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်း ထိုကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းသည် မည်သို့မှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အခြေခံလူအခွင့်အရေး များအား ချိုးဖေါက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကိုပါကြီး သေဆုံးခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံသားတို့၏ အခွင့်အရေးများကို မည်သို့မျှ လေးစားလိုက်နာခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ထိုနိုင်ငံသားများအပေါ် မည်မျှခြိမ်းခြောက် အကြမ်းဖက်မှုများ အသုံးပြုနေခြင်းကို အလွန်ဆိုးရွားစွာ ပြသ လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခြင်းများသည် လွန်စွာ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသည့် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများအား ချိုးဖေါက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူထုအား ဖိနှိပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများအား ငြင်းဆန်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သို့ နည်းလမ်း များအား မည်မျှစနစ်တကျ သုံးစွဲနေသည်ကို ကိုပါကြီးသေဆုံးခဲ့သည် ဖြစ်ရပ်မှာ သိသာ ထင်ရှားစေပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ကိုပါကြီး အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည်တို့ကို ဖေါ်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပြီး သူသေဆုံးခြင်း ကိစ္စသာမက မည်သည့် ဥပဒေ၏ပြင်ပတွင် သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုးကိုမဆို စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် မိမိတို့မှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မိမိတို့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမျာ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထိုကဲ့သို့သော ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း နှိပ်စက်ခြင်း များကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ကိုပါကြီးကဲ့သို့သောအမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဥပဒေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည့် မည်သည့် အမှုမျိုးတို့အတွက်မဆို လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပေးပါရန် တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။ အကယ်၍ အစိုးရအနေဖြင့် လွတ်လပ်သည့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် ကို တွေ့မြင်လိုပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယခု ကိုပါကြီးကိစ္စအတွက် လေးလေးနက်နက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ စနစ်တကျဖြစ်ပျက်နေသည့် လူမဆန်သည့် ကိစ္စရပ်များအားလည်း အဆုံးသတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)
ကိုတိတ်နိုင် +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ကိုဘိုကြည် +၉၅(၀)၉၄ ၂၅၃၀ ၈၈၄၀
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာဘာသာကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါသည်။
Tags: 1988 Uprising, Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Burma Army, Burma Government, Civil Rights, Daw Aung San Suu Kyi, Democratic Karen Buddhist Army, Extrajudicial Killing, Human Rights Violations, Journalists, Ko Par Gyi aka Aung Kyaw Naing, Tri Color Students Group